Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta kusii jeeda Qadar • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta kusii jeeda Qadar
Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta kusii jeeda Qadar
December 12, 2018 - By: HORSEED STAFF
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan cali Kheyre ayaa maanta lagu wadaa in uu safar ugu amba baxo magaalada Doxa ee wadanka Qadar.
Sida ilo xog ogaal ah ay HM u sheegeen safarka Ra’iisul wasaaraha Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa ku qotoma ka qeyb galka shirka sanadlaha ah ee Doha Forum kaasoo sanadkiiba mar la qabto.
Madax ka kala socota wadamada caalamka ururo iyo Hay’addo caalami ayaa la filayaa in ay ka qeyb galaan shirka iyadoona uu Ra’iisul wasaraha helay casuumaad la xiriirta ka qeyb galka shirkan heerka caalami.
Xubno ka tirsan xafiiska Ra’iisul wasaaraha ayaa u sheegay warbaahinta in ka qeybgalka shirka kadib uu Ra’iisul wasaare Kheyre kulan la qaadan doono madaxda wadanka Qadar kulankaas oo lagu gorfeyn doono xoojinta xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Qadar.
Safarkan uu Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ku tagayo magaalada Doxa ee caasimadda dalka Qadar ayaa kusoo beegmaya xili ay jirto xasarad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kaasoo ay weli ku kala qeybsan yihiin xildhibaanada iyo gudoonka golaha shacabka.